शुभ खबर, दशकयता डा. केदार बुढाथोकीको हुलिया बदलिएको छ । पिता–पुर्खाले अँगालेका खेती–किसानीमै फर्किएका छन् । अवकाशपछिको जीवन कसरी बिताउने भन्ने द्विविधामा उनी फसेनन् । २०६२ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को वरिष्ठ वैज्ञानिकबाट बिदा लिएपछि तीन दशकपूर्व आफूले गहन अध्ययन–अनुसन्धान थालेको टमाटर खेतीमै घोत्लिन थाले । साढे तीन दशकको जागिरे–यात्राले बिट मार्दा उनको हातमा ३० लाख रुपैयाँ पर्‍यो । उनले तत्काल संकल्प उमारे, ‘यो रकम म टमाटर खेतीकै अनुसन्धानमा लगाउँछु ।’ तरकारीको बीउ आयात गर्दा बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ विदेशिन्छ । आफूले टमाटरको बीउ उत्पादन गर्न थालेपछि अहिले ८० प्रतिशत बीउमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको उनको दाबी छ ।
नयाँ जातको नाम राखियो– ‘सिर्जना’ । उनै सिर्जना आचार्यको नाम
२०५२ सालमा लन्डन युनिभर्सिटीबाट ‘बेमौसमी प्याज’ मा विद्यावारिधि गरे पनि डा. बुढाथोकीले आफ्नो सिंगो जीवनलाई टमाटरकै अनुसन्धान र विकासमा समर्पित गरे । त्यसो त उनी प्याजको अनुसन्धानमा पनि लागे । बेमौसमी–१ नामको नयाँ जात पनि विकास गरे । तर, त्यसलाई रजिस्टर्ड गर्न सकेनन् । देशलाई टमाटरमा आत्मनिर्भर बनाएर उनी प्रशन्न छन् । भन्छन्, ‘मजस्तै अरू वैज्ञानिकहरू पनि यसरी नै अनुसन्धानमा दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने हामीले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं ।’ Source: Newsagro
प्रकाशित मिति : २०७४, २२ पुष शनिबार १८:२४